Galmudug oo beenisay weerarkii lagu qaaday Guriga madaxwayne Guuleed. | ogaden24
Galmudug oo beenisay weerarkii lagu qaaday Guriga madaxwayne Guuleed.
Madaxtooyada maamulka Galmudug ayaa war ka soo saaray warar ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegayay in Weerar lagu qaaday Xalay Hotel Magaalada Gaalkacyo uu ka degen yahay Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Afhayeenka Madaxweynaha Galmudug C/llaahi Xaashi Faarax ayaa Been abuur ku tilmaamay Wararka ay sheegeen warbaahinta oo ahaa in Xalay Weerar lagu qaaday Hotelka ku yaala Magaalada Galkacayo oo lagu Magacaabo Five Star islamarkaana uu hadda dege yahay Madaxweynaha Galmudug,
Afhayeenka ayaa sheegay in Warkaasi uu yahay mid been abuur ah mana jiro weerar lagu qaday Madaxwayne Guuleed warbaahinta wararka ay baahiyeen ma ahan war sax ah.
Dhanka kale Afhayeenka Galmudug ayaa intaa ku daray hadalka ka soo baxay in lala Xisaabtami doono Dadka wararkaas faafiyay ee ka soo horjeeda Amaanka Gobolka Mudug iyo Heshiiskii lagu gaaray Magaalada Gaalkacyo.